Sinkretisma - Wikipedia
Ny sinkretisma na senkretisma dia fifangaroan' ny fomban-javatra roa na maro, indrindra ny fifangaron' ny fivavahana roa na maro, izay heverina fa tokony tsy hifangaro.
2 Ny sinkretisma eo amin' ny fivavahana
2.1 Ny sinkretisma teo amin' ny tantaran' ny fivavahana
2.2 Ny sinkretisma amin' izao fotoana izao
Ny teny hoe sinkretisma na senkretisma dia avy amin' ny teny grika hoe συγκρητισμός / sunkrêtismós izay midika tany am-boalohany hoe "firaisan' i Kreta" na "firaisan' ny Kretôsy" (i Kreta na Kretôsy dia nosy ao amin' ny Ranomasina Mediteranea): fanakambanana ny tafika amin' ny ady izany. Niitatra ivelan' ny resaka adin' ny tafika izany ka nahazo koa ny ny foto-pampianarana sy ny fivavahana izay tena ampiasana io teny io.
Ny sinkretisma eo amin' ny fivavahana[hanova | hanova ny fango]
Ny teny hoe sinkretisma na senkretisma izay matetika adika amin' ny teny malagasy hoe "fampirafesam-pinoana" na "fampiharoharoana fivavahana" dia ilazana ny fivavahana mahaleo tena izay niforona vokatry ny fampifangaroana singa maro avy amin' ny fivavahana samihafa. Ny foto-pampianarana na ny fanaon' izany fivavahana izany dia fifangaroan-tsinga avy amin' ny finoana samihafa.
Ny sinkretisma teo amin' ny tantaran' ny fivavahana[hanova | hanova ny fango]
Ny sinkretisma dia efa hita tamin' ny Andro Taloha. Ao amin' ny Baiboly dia ahitana firesahana ny amin' ny fampiharoharoana fivavahana teo amin' ny vahoakan' i Israely tamin' ny andron' i Hôsea mpanjakan' i Jodà (jereo: 2Mpanj. 17) izay nahitana ny fampifangaroana ny Lalàn' i Mosesy (na Lalàn' i Môizy) amin' ny an' ireo vahoaka hafa izay nanaovana sesitany azy ireo (2Mpanj. 17.33).
Ny Rômana tamin' ny Andro Taloha dia nampiditra ireo andriamanitra ivavahan' ny vahoakan' ny firenena voababony tao amin' ny fianakaviamben' ny andriamanitra rômana, mba tsy hisian' ny fanoherana ara-pivavahana tao amin' ireo vahoaka mivavaka amin' andriamanitra maro.
Sahala amin' izany koa ny zava-niseho tamin' ny nampidiran' ny misionera ny fivavahana kristiana tany Amerika Atsimo. Nanova ny finoan' ny ankamaroan' ny mponina tany ireo misionera ireo nefa nanao toy nataon' ny Samaritana tamin' ny Andro Taloha izay tsy namela ny fivavahan-drazany. Tao Brezily dia maro ireo Kristiana izay manohy manatanteraka ny fivavahana vôdo sady mankalaza fety ho an' ireo andriamanitra nivavahan' ny razany taloha toa ilay andriamanibavy Iemanja.
Amin' izao andro ankehitriny izao dia heverin' ny mpitondra fivavahana katôlika tao Vatikana sasany fa sinkretisma ny fihaonana izay atao hoe "fihaonana tao Assise" tamin' ny taona 1986 na dia tsy izany no fikendren' ireo mpikarakara izany fihaonana izany.
Ny fivavahana tamin' ny Andro Taloha dia nanjakan' ny fampifangaroana finoana ka sarotra ny hahafantarana hoe ny an' iza no nandray ny an' iza. Ny fivavahana amin' i Mitra izay nafangaro tamin' i Apôlôna tao amin' ny fiakaviamben' ny andriamanitra tao Rôma.
Ny sinkretisma amin' izao fotoana izao[hanova | hanova ny fango]
Maro ireo fivavahana izay azo lazaina fa sinktretista ankehitriny. Isan' izany ny sikisma izay fifangaroan-tsinga avy amin' ny hindoisma sy ny fivavahana silamo.
Ny fiarahan' ny bodisma sy sintoisma ao Japàna hatramin' ny taonjato faha-8 dia ohatra mazava momba ny sikretisma izay mbola hita ankehitriny, izay atao hoe shinbutsu shūgō. Tamin' ny taona 2005 dia niisa 107 tapitrisa ny Sintoista (84 %n' ny vahoaka japôney) ary 91 tapitrisa ny Bodista (71 %n' ny vahoaka japôney). Ny ankamaroan' ny Japôney dia mankalaza raharaham-panambadiana sy fahaterahana araka ny fomba sintoista fa ny fandevenana kosa araka ny fomba bodista. Ankoatra izay dia matetika ahitana fitoerana masina sinto ny tempoly bodista ary ahitana alitara (ôtely) bodista ny ao amin' ny fitoerana masina sinto ao Japàna
Ahitana toe-javatra sahala amin' izany ny ao Indônezia izay ahitana olona mpanaraka ireo fiangonan-dehibe, toy ny bodisma sy ny kristianisma sy ny hindoisma ary ny silamo, izay manaraka ny fomba sy ny finoan' ny fivavahan-drazany.
Ny kaôdaisma any Vietnamy dia fivavahana mifangaro koa, sahala amin' ny fifangaroan' ny vôdo amin' ny kristianisma ao amin' ireo firenena maro ao Afrika sy any Haity. Ny antoanisma any Belzika dia maneho endrika sinkretisma ara-pivavahana na fihetsiketsehana sinkretika izay mampiditra ny singa maro avy amin' ny fivavahana rehetra.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Sinkretisma&oldid=1039029"
Voaova farany tamin'ny 17 Oktobra 2021 amin'ny 11:40 ity pejy ity.